Global Voices teny Malagasy » Tokyo: Ambany Ny Taha-pivitrihana Tamin’ny Fifidianana Governora Noho Ny Ranomandry · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Febroary 2014 0:08 GMT 1	 · Mpanoratra Keiko Tanaka Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Satria niteraka filatsahanà oram-panala matevina indrindra  tao anatin'ny 45 taona ny tafio-drivotry ny ranomandry tao Tokyo dia 46,16 isan-jaton'ny mpifidy ihany no nandeha nandatsa-bato nifidy governora tamin'ny Alahady 9 Febroary 2014, fifidianana fahatelo nahitana taham-pivitrihana ambany indrindra
Olona mitondra elo ao anaty oram-panala matevina. Sary nalain'ilay mpisera Flickr lestaylorpboto tamin'ny 8 Febroary tao Tokyo (CC BY NC-ND 2.0)
Tantaran'ny fifidianana governora ao Tokyo
Masuzoe Yoichi no governera vaovao voafidy, minisitra teo aloha notohanan'ny Antokon'ny fitondrana Liberaly-Demaokraty sy ny Antoko Komei, nahazo vato 2.112.979 izy, na eo amin'ny 43 isan-jaton'ny vato eo.
Nizara ny tsikerany mikasika ny taham-pahavitrihana ambany ny mpisera Twitter. Filôzôfy Tatsuru Uchida  [ja] naneho ny fahadisoam-panantenany:
Mahatonga ahy hahatsiaro ho afaka adidy ny isan'ny mpifidy nandeha nandatsa-bato tamin'ny fifidianana governora tao Tokyo. Toa hitako fa ny Japoney miaraka amin'ny soatoavina ifanarahana sy ny fomba politika ifanarahana dia mizotra tsimoramora mankany amin'ny lalana tahaka ny hoe “e! misy tevana eo aloha”
Mpanao sary Nigirikopushi nanao kisarisasy mampihomehy, mampifandray ny hatsiaka amin'ny toetr'andro sy ireo kandidà manohitra ny nokleary resy. Ao afovoany, mihazona elo telo maneho “Fahasambarana”, “Olaimpika” ary “Toekarena” ilay nandresy Masuzoe ary mitafy Palitao mafana miaraka amin'ny sary fanevan'ny Antoko Liberaly Demaokratika sy ny Antoko Komei. Eo ankavia kosa ny sarin'ilay mari-koditra Kenji Utsunomiya, mpisolovavan'ny zon'olombelona manohitra ny nokleary izay nahazo laharana faharoa. Ary eo ankavanana ny kandidà manohitra ny nokleary Morihiro Hosokawa, laharana fahatelo, mitsangana eo akaikin'ny mpanohana azy, Praiminisitra teo aloha Junichiro Koizumi, izay milaza fa “mangatsiaka ao ivelany ao”. Hoy ny vakin'ny soratra amin'ny ranomandry “manohitra ny nokleary”:
Kisarisary mampihomehy momba ny fifidianana governoran'i Tokyo.
Nilaza [ja] ilay mpitati-baovao an-gazety teo aloha, Eiken Itagaki fa mety nanitsakitsaka ny lalànan'ny Fifidianana Manampahefam-panjakana ao Japana i Masuzoe, satria nizara mari-pamantarana Olaimpika Tokyo izay mitentina 3000 yens Japoney (eo amin'ny 30 dolara eo) ny iray mba hahazo fanohanana, fihetsika izay manitsakitsaka ny lalàna mandràra ny fanampiana ara-politika hanaovana fanentanana. Ny mpitory dia ny vondrona mpikatroka izay nametraka fitoriana ny governora teo aloha Naoki Inose  tamin'ny taon-dasa ihany noho izy voalaza fa nahazo fanampiana tahaka izany. Nilaza i Inose fa vola nindramina manokana izany saingy niala ihany izy noho ity olana ity. Andrasana ny tohin'ny fitoriana ny governora vaovao raha handray ny fiampangana azy ny fitsarana na tsia.
L.Finch no nanitsy ny lahatsoratra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/02/15/57668/
 filatsahanà oram-panala matevina indrindra: https://globalvoicesonline.org/2014/02/09/heavy-snowfall-brings-playtime-to-tokyo/
 Masuzoe Yoichi : http://www.japantoday.com/category/politics/view/tokyo-governor-election-puts-nuclear-power-to-test
 Nilaza : http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/f95ae8e918107f94940f68a0d300926f
 ny vondrona mpikatroka : http://www.japantimes.co.jp/news/2013/11/25/national/activists-file-criminal-complaint-against-tokyo-governor/#.Uvg6wtJ_v1Y